Ny fahatsapana lolom-po ao amin'ny mpivady | Bezzia
Ny fahatsapana lolom-po amin'ny mpiara-miasa
Na dia toa hafahafa aza izany, Ny fahatsapana lolom-po dia matetika hita amin'ny mpivady maro. Zava-boajanahary izany matetika mitranga rehefa miady amin'ny olon-kafa. Raha mitranga izany, dia ilaina ny mamaha azy io, satria raha tsy izany dia mety hiteraka olana lehibe ho an'ny hoavin'ny mpivady.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny antony mahatonga ny lolom-po amin'ny fifandraisana sy inona no atao mba hahafahana mamarana azy.
1 Ny lonilony ao amin'ny mpivady
2 Famantarana fa misy lonilony amin'ny mpiara-miasa
3 Ahoana no handresena lolom-po amin'ny namanao
Ny lonilony ao amin'ny mpivady
Ity karazana fihetseham-po ity dia matetika miseho rehefa avy nalahelo ny mpiara-miasa. Mba tsy ho lasa lavitra ilay zavatra, dia tsy maintsy mihelina sy manjavona ao anatin'ny fotoana fohy ny lonilony. Avy eo dia asehonay aminao izay toe-javatra miseho matetika amin'ny olona iray ao anatin'ny fifandraisana:
Tsy mahafantatra ny fomba hanehoana ny fihetseham-pony amin'ny mpiara-miasa, mety hitarika fahasosorana amin'ny olon-tiana ho tonga amin'ny mazava.
Ny fisian'ny fanararaotana ara-batana na ara-tsaina ataon'ny mpiara-miasa, mahatonga fahasosorana mafy hipoitra aminy.
Ny tsy fahampian'ny fahatokisana vokatry ny tsy fahatokiana sasany Mety hiteraka lolom-po lehibe amin’ilay olon-kafa izany.
Famantarana fa misy lonilony amin'ny mpiara-miasa
Ny famantarana mazava indrindra izay afaka manondro fa misy lolom-po amin'ny mpivady, Izany dia noho ny tsy fahafahana mamela heloka izay tena nampanaintaina. Ny fahasimbana azo dia lehibe sy manan-danja tokoa ka izay fihetsika na fihetsika ataon'ny olon-kafa dia mety manafintohina. Ny iray amin'ireo famantarana izay manondro fa misy lolom-po mahery vaika ao amin'ny mpivady, dia noho ny fahaverezan'ny fahatokisana lehibe azy.
Ahoana no handresena lolom-po amin'ny namanao
Raha mitombo ny lolom-po ary tsy resy tanteraka, dia tsara ny mandeha haingana any amin'ny matihanina iray izay afaka mamaha ny olana toy izany. Momba ny torohevitra dia zava-dehibe ny mandinika ireto manaraka ireto:
Ny fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra dia zava-dehibe amin'ny karazana fifandraisana rehetra. Amin'ny alalan'ny firesahana dia takatry ny olona ary azo atao ny mamaha izany olana izany. Tsara ny miara-mipetraka amin'ilay mpiara-miasa ary manaiky ny alahelonao amin'izy ireo.
Raha misy ny lolompo, dia ilaina ny mandray fanapahan-kevitra izay manampy amin'ny famahana ny olana. Raha tsy misy atao, Azo inoana fa ho raikitra tsikelikely ilay olana ary mety hampitsahatra ny fiarahana.
Ny fitadiavana fanampiana amin'ny olon-kafa dia mety ho fanalahidin'ny famelana ny lolompo sy mankafy tanteraka ny mpivady. Noho ny matihanina tsara, ny fahatokisana sy ny filaminana dia azo atao amin'ny fifandraisana ary mampandroso azy tsy misy olana.
Raha fintinina, Ny fahatsapana lolom-po amin'ny mpiara-miasa dia mety ho tsara ny miasa amin'ny fahatokisana ny fifandraisana ary ataovy matanjaka kokoa. Raha tsy voavaha ny lonilony, dia azo inoana fa mety hitarika amin'ny fiafaran'ny fifandraisana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny fahatsapana lolom-po amin'ny mpiara-miasa
Hevitra handravaka ny rakitsoratra vinyl anao